I-Tonto National Forest Lodging Room Motel, Ukulala 4 - I-Airbnb
I-Tonto National Forest Lodging Room Motel, Ukulala 4
Roosevelt, Arizona, i-United States
Ikamelo e-i-lodge ibungazwe ngu-Susie
U-95% wezivakashi zakamuva unikeze u-Susie izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Igumbi lemothelwe yosiko, izinga eliphansi, imibhede eyindlovukazi emibili, isiqandisi esincane, i-microwave, ibhodwe lekhofi, ukugcinwa kwendlu kwansuku zonke kanye nebhavu langasese elinezinsiza.
Sitholakala imizuzu eyi-10 ukusuka eRoosevelt Lake, endaweni eqhelile eTonto National Forest. Lesi sakhiwo esihluke ngokuhlukile sinikezela ngezinketho zokulala ezahlukahlukene, zonke ezinokubukwa okuhle kweTonto National Forest. Kungakhathaliseki ukuthi ubamba iqhaza emqhudelwaneni wokudoba i-bass e-Roosevelt Lake, uhlela ukuphunyuka ngempelasonto e-Phoenix, ukuhlala isikhathi eside komndeni, noma ukubaleka endaweni yase-Phoenix...I-Roosevelt Resort Park iletha ukunethezeka kwesimanje wonke umuntu ozokujabulela. Amakamelo ethu e-double queen motel abheke ichibi lokubamba futhi akhulule futhi anikezela ngokubukwa kwengemuva lentaba le-Tonto National Forest lapho ungajabulela khona izinyoni zethu ezihlala khona ngenkathi uphumule kuvulandi lakho elinomthunzi. Izihlalo zangaphandle ze-Adirondack ziyakwamukela ukuthi uphumule futhi ujabulele ukushona kwelanga okumangalisayo kwe-Arizona nokuphuma kwelanga. Wonke amakamelo amamotela akhethwe kahle anezindlu zangasese, amalineni, abenzi bekhofi, amafriji, ama-microwaves, nezomisa izinwele.
4.64 out of 5 stars from 121 reviews
4.64 · 121 okushiwo abanye
Sinikezela ngamakhabethe namagumbi angenazilwane ezifuywayo kanye namagumbi azoqashwa e-Tonto National Forest, imizuzu ukusuka e-Roosevelt Lake kanye nase-Indian Ruins Monument. Eduze uzothola izindlela zokuhamba izintaba, I-Equestrian kanye ne-ATV trail, i-Apache Trail futhi sitholakala uhambo lwemizuzu engama-20 ukusuka e-Globe, AZ.
Uma ufika ngemva kuka-5PM, sicela ushayele I-Reception ukuze uhlele Ukungena Okungenamthungo Okungenamthungo njengoba sinamahora okwamukela alinganiselwe. Indawo yethu yokudlela nendawo yokudlela inikezela nge-American Comfort Food Fridays kuze kube ngamaSonto futhi inikeza Ihora Elijabulisayo nsuku zonke kusukela ngo-3PM - 7PM. Sithemba ukuthi uzokujabulela ukuhlala kwakho endaweni yethu yokungcebeleka ebabazekayo!
Uma ufika ngemva kuka-5PM, sicela ushayele I-Reception ukuze uhlele Ukungena Okungenamthungo Okungenamthungo njengoba sinamahora okwamukela alinganiselwe. Indawo yethu yokudlela ne…
Hlola ezinye izinketho ezise- Roosevelt namaphethelo